ဆောင်းပါးကဏ္ဍ Archives | Page 25 of 198 | Frontier Myanmar
သွေးရည်ကြည်ကုထုံးဖြင့် ကိုဗစ်-၁၉ရောဂါပြင်းထန်လူနာများကို ကုသနိုင်ခဲ့သဖြင့် ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနက သွေးရည်ကြည် အလှူခံလျက်ရှိသည်။
အိမ်ပြန်နိုင်မယ့် အခွင့်အလမ်း အမိအရ ဖမ်းဆုပ်သူ ကယားအမျိုးသမီးများ
ရခိုင် အေအေ တပ်ဖွဲ့အရေး လွှတ်တော်တွင်းက သင်ခန်းစာ
စည်သူအောင်မြင့် ရေးသားသည်။ ပြီးခဲ့တဲ့ အပတ်က အမျိုးသားလွှတ်တော်တွင်းမှာ ရခိုင်တိုင်းရင်းသား အမတ်တစ်ယောက်က အငြင်းပွားဖွယ် အရေးကြီး အဆိုတစ်ရပ် တင်ပြလာပါတယ်။ ရခိုင်အမတ် ဦးဝေစိန်အောင် တင်လာတဲ့ အဆိုကတော့ “ မြန်မာ့ တပ်မတော်နဲ့ အေအေ လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့တို့အကြား ရခိုင်ပြည်နယ် အတွင်း ယခုတလော တကျော့ပြန်.
ဘာသာခြား ပိုင်နက်တွေမှာ ဘုရားတည်တာ ဘာဆက်ဖြစ်လာနိုင်သလဲ
စည်သူအောင်မြင့် ရေးသားသည်။ အခုရက်ပိုင်း မြန်မာလူမှု အသိုင်းအဝိုင်းထဲမှာ လှုပ်လှုပ်ခတ်ခတ် ဖြစ်သွားစေတဲ့ သတင်းကတော့ မြိုင်ကြီးငူ ဆရာတော် ကရင်ပြည်နယ် ကျေးရွာတချို့က ခရစ်ယာန် ဘုရားကျောင်းဝင်းထဲနဲ့ မူဆလင် ဗလီဘေးမှာ စေတီငယ်တွေ လိုက်တည်နေတဲ့ သတင်းပါ။ သတင်းဖော်ပြချက်တွေအရ ကရင်ပြည်နယ် အာဏာပိုင်တွေ၊ သာသနာရေးဆိုင်ရာ ဆရာတော်တွေ၊ ကေအင်န်ယူ.
ကလေးငယ်တွေကို ပြုစု ပျိုးထောင်ပေးခြင်း
သီရိဟန် ရေးသားသည်။ ကလေးငယ်တစ်ယောက် လူ့ပတ်ဝန်းကျင်ထဲကို စတင်ဝင်ရောက်ဖို့ ကြိုးစားတဲ့အချိန်မှာ သင်ကြားပေးတဲ့ လက်ဦးဆရာတွေဟာ သူတို့ရဲ့ မိဘတွေ ဖြစ်တယ်ဆိုရင် ဒုတိယကတော့ မူကြိုကျောင်းက ဆရာဆရာမတွေနဲ့ ကျောင်းပတ်ဝန်းကျင်ကိုလည်း မေ့ထားလို့ ရမှာမဟုတ်ပါဘူး။ “ကလေးတွေရဲ့ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ၊ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ဆိုရင် သူတို့ရဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်ဟာ ပျော်ပျော်ရွင်ရွင်နဲ့ လေ့လာနိုင်စွမ်းရှိတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်ရှိမှသာ.
သီရိဟန် နှင့် Frontier ရေးသားသည်။